မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ (၁) | Danya Wadi
»ဆောင်းပါးများ»မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ (၁)
မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ (၁)
Posted by danyawadi on January 20, 2012 in ဆောင်းပါးများ
သြဂုတ်လ ၂၉ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဌမနေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) မှ ဦးဇာယာဒ် ရော်မ (ခ) ဦးဌေးဝင်း ၏မေးခွန်းကို“မြန်မာ မွတ်စလင် ဟု သုံးနှုံးသွား သူများသည်
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊မောင်းတော ဒေသအတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများကို ရည်ညွန်းပြော ဆိုခြင်းဟု ယူဆ ပါကြောင်း..”
ဟု ဖြေကြားချက်ကို ကြားမိ၍ မြန်မာမွတ်စလင် ဟူသည်မည်သူများနည်းဟု ဆိုသည်ကို သမိုင်း အထောက် အထား များရှာဖွေ
၍ ပြည်သူ ထဲမှ ပြည်သူ တစ်ဦး က ပြည်သူ့အသံဖြင့် တင်ပြ လိုပါသည်။
အစ္စလာမ်၊ မွတ်ဆလင်မ်၊ မဟာမေဒင်“ အစ္စလာမ်”ဟုသည် အရဘီစကား ဖြစ်ပါသည်။ “ငြိမ်းချမ်းစေခြင်း၊ အမိန့်နာခံခြင်း”
ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ (အလ်-ဖရာအိဒ် အရဗီ-အင်္ဂလိပ် အဘီဓါန် ၊ဘေရွက်မြို့ထုတ်)
“မွတ်ဆလင်မ် ”ဟူသည်အရဘီသာသာစကားဖြစ်သည်။ “ငြိမ်းချမ်းစေသူ၊ အမိန့်နာခံသူ ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည် ။
လက်တွေ့အသုံးချတွင် အစ္စလာမ် ဟူသည် ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်၍ ယင်းဘာသာတရားကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူ
မည်သူကိုမဆို မွတ်ဆလင်မ် ဟု ခေါ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် “မွတ်ဆလင်မ် ” ဟူသည်မှာ “အစ္စလာမ်” ဘာသတရားကိုကိုးကွယ် သူမည်သည့်လူမျိုးမဆိုခေါ်ပြီးလူမျိုးတစ်မျိုး ၏ အမည်မဟုတ်ပါ။
“မဟာမေဒင်” ဟူသည် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ က ခရစ်တော် ၏သာသနာ “ခရစ်ယာန်” ဟုခေါ်သကဲ့သို့ အစ္စလာမ် ဘာသာ၏
ခေါင်းဆောင်ကြီး “တမန်တော် မုဟမ္မဒ်” ကိုအစွဲပြု၍ “မဟာမေဒင်” ဘာသာတရားဟု မှားယွင်းစွာ အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ (ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာ ကိုဘားမား ၊ ရန်ကုန်ကို ရဲန်ဂူးန် ဟု မှားယွင်းစွာ အမည်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ) (စာရေးသူ၏ ဥပဒေဘွဲ့စာတမ်း)
အေဒီ (၆၅၂-၆၆၀) ပုဂံ၊ ပိတ်သုံမင်း ခေတ်တွင် အာရဗ်ကုန်သည် သဘောင်္များ သထုံ မုတ္တမ ဆိပ်ကမ်း မျာသို့ မကြာခဏ
၀င်ရောက်ကြကြောင်း ၊ အေဒီ (၈၀၀) ကျော်တွင်ရေးသား ခဲ့သော အာရဗ် မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။
ထိုအာရဗ် များမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်မ် များဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ (ရခိုင်ဒေသ၊ မွန်ဒေသ)အတွင်းဦးစွာရောက်ရှိလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှာ ဘင်္ဂါလီများ မဟုတ်ပဲ အာရဗ် မွတ်ဆလင်မ်များ
၁၈၂၃ – ခုနှစ်မတိုင်မီကစ၍မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံကို ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ်
အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူရာတွင် –
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၂၅ – ခု တွင် ၁၀၀၀၀၀
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၃၅ – ခု တွင် ၂၀၁၅၃၆
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၄၅ – ခု တွင် ၃၆၆၃၁၀
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၅၅ – ခု တွင် ၄၂၈၀၄၂
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၆၇ – ခု တွင် ၄၄၅၄၈၃
(၁) ။ ဥရောပတိုက်သား ကပြား — လူဦးရေပေါင်း ——— ၁၆၉
(၂) ။ အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသား ……. လူဦးရေပေါင်း ——- ၃၀၅၅၉
(၃) ။ မြန်မာ၊ရခိုင်၊တလိုင်း …….. လူဦးရေပေါင်း —— ၃၄၃၇၇၈
(၄) ။ ရှမ်းတောင် သူ ………… …လူဦးရေပေါင်း …………….. ၄၉
(၅) ။ ကရင်……………………. လူဦးရေပေါင်း …………….. ၁၀
(၆) ။ ချင်း …………………….. လူဦးရေပေါင်း…………. ၁၉၂၀၃
(၇) ။ -မြန်မာပသီ…………….. လူဦးရေပေါင်း…………. ၂၄၀၀၃
(၈) ။ ရဘိန်း ………….……… လူဦးရေပေါင်း………….. ၁၉၂၀၃
(၉) ။ ကမန် ………….……… လူဦးရေပေါင်း………….. ၁၀၆၄၈
(၁၀) ။ တရုတ်……………… လူဦးရေပေါင်း ……………….၁၈၄
(၁၁) ။ အခြား တိုင်းရင်းသား. လူဦးရေပေါင်း ……..…… . ၅၀၅၃
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၂၅ – ခု တွင် ၈၄၉၁၇
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၄၅ – ခု တွင် ၁၂၇၄၅၅
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၅၅ – ခု တွင် ၂၁၃၆၉၂
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၆၅ – ခု တွင် ၄၄၃၆၉၅
ခရစ်နှစ် – – ၁၈၆၇ – ခု တွင် ၄၆၄၈၁၅
(၁) ။ ဥရောပတိုက်သား ကပြား — လူဦးရေပေါင်း ……..၂၄၉၂
(၂) ။ အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသား ……. လူဦးရေပေါင်း ………..၃၂၄၁
(၃) ။ မြန်မာ၊ထားဝယ် ၊တလိုင်း … လူဦးရေပေါင်း ……..၂၀၉၃၁
(၄) ။ ကရင် ……………………….. လူဦးရေပေါင်း ……၁၁၅၄၄၉
(၅) ။ ရှမ်း ၊ တောင် သူ ………….. လူဦးရေပေါင်း………၃၀၅၂၇
(၆) ။ -မြန်မာပသီ ………………….. လူဦးရေပေါင်း……….၂၄၀၀၃
(၇) ။ ချင်း ……………………….. လူဦးရေပေါင်း……… ၁၉၂၀၃
(၈) ။ ရဘိန်း ………………………. လူဦးရေပေါင်း….…….. ၆၇၃
(၉) ။ တရုတ် ……………………… လူဦးရေပေါင်း………….၈၃၈၂
(၁၀) ။ ကျော့ လူမျိုးနှင့်အခြား ….. လူဦးရေပေါင်း …………၁၇၆၄
မှတ်ချက် ။ ။ ကျော့ = တောင်သူ +ပသျှူး
(၁) ။ ဥရောပတိုက်သား ကပြား — လူဦးရေပေါင်း…………၂၃၁၇
(၂) ။ အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသား ………. လူဦးရေပေါင်း………၁၇၇၂၈
(၃) ။ မြန်မာ၊ထားဝယ် ၊တလိုင်း ….. လူဦးရေပေါင်း ….၁၀၇၃၈၂၉
(၄) ။ ကရင် …………………….… လူဦးရေပေါင်း…….၂၇၆၆၉၈
(၅) ။ ရှမ်း ၊ တောင် သူ …………… လူဦးရေပေါင်း………၂၈၁၂၈
(၆) ။ -မြန်မာပသီ …………….…. လူဦးရေပေါင်း………..၂၀၇၂
(၇) ။ ချင်း ………………………. လူဦးရေပေါင်း……….၂၂၉၅၉
(၈) ။ ရဘိန်း…………………….. လူဦးရေပေါင်း ………..၅၅၆၅
(၉) ။ တရုတ်……………………. လူဦးရေပေါင်း…………၂၀၅၀
(၁၀) ။ အခြား လူမျိုး ………………… လူဦးရေပေါင်း………. ၁၀၈၅၃
မှတ်ချက်။ ။ ပညာဝဎ္ဋန ကျမ်း စာတမ်းကို သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ဗမာ့မော်ကွန်းမှတ်တမ်း တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
← ကျနော် ခွဲထွက်ရေးသမား | Arakan Review
မြန်မာ မွတ်စလင် တို့၏ မျိုးချစ်သမိုင်း →